Masar oo sheegtay u badalida Aya Sophia loo badalaayo Masjid ay kahor imaaneyso dhaqanka islaamka. - Idman news
Masar oo sheegtay u badalida Aya Sophia loo badalaayo Masjid ay kahor imaaneyso dhaqanka islaamka.
Wakiilka hore ee Al-Azhar, Cabbaas Shooman, ayaa wuxuu sheegay in aragtida Turkiga ee ah inay u rogto Matxafka Hagia Sophia masaajid aan diinta Islaamka waafaqsanayn, isla markaana aan waafaqsaneen ixtiraamka goobaha cibaadada ee dhammaan diimaha.
Cabbaas Shooman wuxuu yiri maanta oo Jimce ah: “Islaamku wuxuu ixtiraamayaa meelaha lagu cibaadeysto ee diimaha kaladuwan, mana ahan wax la ogol yahay in kaniisadda loo beddelo masaajid, sida aan loo ogoleyn in masaajidka loo beddelo kaniisad, Mabda’daasna waa mid uu diidayo fikirka Al-Azhar, waana waajib in goobaha cibaadada lagu ixtiraamo dhammaan kuwa raacsan diimaha kala duwan.”
Asigoo hadalkiisa sii wato ayaa wuxuu intaas ku daray: “Wixii la xiriiro Islaamku waa Islaam, waxa diinta kiristanka ka mid ahna waa Masiixi, wixii ku saabsan diinta Yuhuudda waa Yuhuud, dhaqankan turkigana waa mid kicinaya saxmad isla markaana aan waadaqsaneyn tacaaliinta Islaamka ee aan ognay horayna aan u soo dhaqan galin jirnay sidoo kalana ay soo hirgaliyeen kuwii naga horreeyay ee xaqqa ah ku taagnaa kuwaasoo aqoon u lahaa ixtiraamida muqadasaatka diimaha kale” waa siduu hadalka u yiriye.
Hadalkaan ayaa imaanayo kadib markii Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan uu dhawaan sheegay hadal kiciyay muran xoogan ka dib markii uu shaaca ka qaaday inuu damacsan yahay inuu dib u furo Aya Sophia si ay ugu tukadaan Muslimiinta oo markale Masjid looga dhigo.
Maxkamada sare ee Turkiga ayaa dhawaan go’aan ka gaari doonto hadii Matxafkaas dib loogu badalaayo Masjid iyo hadii kale waxaana xusid mudan in Aya sophia ay markii hore aheyd Kaniisad ayadoona kadib loo badalay Masjid waxayna Masaajid aheyd mudo kabadan 4 qarni kahor intaanan 1934tii laga dhigin Matxaf.
Dhanka kale hadalka Wakiilkii Hore ee Al-Azhar ayaa wuxuu imaanayaa kadib markii dhawaan Muftiga Masar uu sheegay in Khilaafadii islaamiga ee Cuthmaaniyiinta ay ahaayeen gumeystayaal hadalkaasoo muran xoogan dhaliyay wuxuuna daba socdaa khilaafka xoogan ee Masar iyo Turkey ka dhaxeeyo.
Previous Mogadishu Journal » Booliiska Hindiya oo toogtay nin ay baadi goobayeen
Next Somali president hails his PM’s call for timely election — Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisul wasaaraha XFS oo mucaaradka kala hadlaya arrimaha doorashooyinka
Dib u dhac markale ku yimid safar uu Cali Guudlaawe ku tagi lahaa Beledweyne – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Shirka Murashaxiinta Madaxweynaha oo la filayo in lasoo gaba-gabeeyo!
Ra’iisul wasaaraha XFS oo mucaaradka kala hadlaya arrimaha doorashooyinka November 25, 2020
BARNAAMIJKA BARQO WANAAGSAN EE DALSAN TV Nasteexo Abdiqadir Ayaa soo Jeedineysa… November 25, 2020
Liverpool, Man City, Real Madrid, Inter Milan, Bayern Munich, Atletico Madrid & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono tartanka Champions League November 25, 2020
Dib u dhac markale ku yimid safar uu Cali Guudlaawe ku tagi lahaa Beledweyne – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia November 25, 2020
Total visitors : 15,338